बझाङमा पहिरोले ७ घर पुरियो, २३ जना बेपत्ता « On Khabar
बझाङमा पहिरोले ७ घर पुरियो, २३ जना बेपत्ता
बझाङको थलारा गाँउपालिका वडा नं ४ डिख्लामा गएराति पहिरो जाँदा २३ जना बेपत्ता भएका छन् । गाउँभन्दा माथिको ढोगदिना भन्ने ठाउँबाट पहिरो खस्दा दुई गाउँका स्थानीय विस्थापित भएका छन् भने भने सात घर पुरिएका छन् । बेपत्ता हुनेमा गगने सार्कीका एकै घरका १८ जना र नरे पार्कीका घरका पाँच जना रहेका छन् । गगने सार्की रोजगारीका लागि भारतमा छन् । उनका माइला छोरा काले सार्की मात्र सकुसल छन् ।
तल्लो डिख्ला र माथिल्लो डिख्ला गाउँका स्थानीय विस्थापित भई त्रिभुवन मा।वि महेन्द्रधारमा बसेका छन् । गाउँ पहिराको जोखिममा परेपछि सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भई आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेको शान्ति मा।वि पाराकाट्नेका शिक्षक मदनबहादुर साउँदले बताए ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा थप विवरणका लागि सम्पर्क हुन सकेको छैन । बाढीले सडक अवरुद्ध भएको र नेटवर्क नहुँदा समयमै खबर नपाएकोले उद्धारमा समस्या भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
उनीहरुले पहिरामा परेर बेपत्ता भएको भन्ने खबर आएको तर लगातारको बर्षाले बाटो अवरुद्ध भएकाले सो घटनास्थलसम्म जान नसकिएको बताएका छन् ।
कालिकोटका गाउँ-गाउँमा नेकपाको सांस्कृतिक अभियान, संसदीय व्यवस्था असफल-सेक्रेटरी रणदिप
बिराटनगर पुगेर विप्लवले भने ३ बुदे सहमति लागु नगरिए विद्रोह गरिन्छ
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रान’लाई भ्याक्सिनले रोक्दैन !
कांग्रेस महाधिवेशनः लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल पक्ष बलियो, गृहमन्त्रीलाई चुनौती !
एमालेको अधिवेशनको उपस्थिती निभ्ने बेलाको बत्ति : डा. बाबुराम भट्टराई
देविनगर स्थीत आरती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न